Buy Holm akwụkwọ | Holmbygden.se
ebe ọdịda 2012 ere Holm si Obodo History Society Akwụkwọ na Holm. Gụọ banyere akwụkwọ na otú ịzụta ya na Holm ma ọ bụ na via online – adabara ma ọ bụrụ na ị na-ebi mba ọzọ na Sweden ma ọ bụ n'ebe ọzọ n'ụwa.
“Holm – Oké ọhịa na mmiri ala”
na-egosi na foto na akụkọ ndụ na obodo si prehistoric ugboro ruo ugbu a. na ọhịa, Lakes na osimiri na-egwuri nnukwu ọrụ ná ndụ ndị mmadụ na-egosi na ọtụtụ nke akwụkwọ na akwụkwọ a. The akwụkwọ na-ewe site mgbe ochie foduru, Immigration obodo nta nke 1300- na 1400s, na omume igwe mmadụ heyday na-ese n'elu mmiri na oge ke mbubreyo 1800s na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Gụọ ihe ndị na azụ cover.
The akwụkwọ dị na mmachi mbipụta na ama rere fọrọ nke nta 400 Nlereanya (!) i November. Were ohere ịtụ akwụkwọ na ị. Ịtụ site na ekwentị, ma ọ bụ na ibudata ya na Holm nke onye nke Board of Directors. I nwekwara ike ịtụ akwụkwọ n'ụlọ site mail n'okpuru.
eziokwu: 250 na n'akụkụ 1.2 kg oyiyi na ederede banyere Holms akụkọ ihe mere eme.
ọtùtù 27×22 cm.
Ịzụta akwụkwọ site na ekwentị / onye na kọntaktị:
mbanye Berget: Lars-Erik Wikholm 0692-500 26
Sundsvall: The akwụkwọ nwere ike zụrụ na Kulturmagasinet shop ozugbo na nri na Vängåvans ere akwụkwọ (maka 299 kr).
More ndị mmadụ na Hembygdsföreningen n'ire akwụkwọ.
Ịtụ akwụkwọ online na postlevereans:
Pịa ebe akwụkwọ iji.nso ụdị.
Mbupu na Posten (a akwụkwọ):
na Sweden: 66 kr
n'èzí Europe: 270 kr
Ịkwụ Ụgwọ ga-mere mfe ụzọ
ị maka obibia
kacha mma kwesịrị ekwesị.
Kpọtụrụ maka ajụjụ:
I nwekwara ike iji ụdị nri na ozi ubi ahụ ka o ziga a
e-mail na ajụjụ ma ọ bụ nchegbu na Lars-Erik. N'okpuru ebe ị na-eziga akwụkwọ n'usoro site mail. The ozi na-aga Hembygdsföreningen.
Land (efu ubi = Sweden):
Print nke picture ịrịba ama iji gosi na:*
Gụọ ihe banyere Holm si Obodo History Society.